Nhau - Ungasarudze sei yakanakisa mhando yekudzimisa moto
Chokudzimisira moto chekutanga chaive nemvumo nekemisiti Ambrose Godfrey muna 1723. Kubva ipapo, mhando zhinji dzezvidzimidzi dzakatangwa, dzakachinjwa nekugadzirwa.
Asi chinhu chimwe chinoramba chakangofanana zvisinei nenguva - zvinhu zvina zvinofanirwa kunge zviripo kune a moto kuvapo. Zvinhu izvi zvinosanganisira okisijeni, kupisa, mafuta uye kuita kwemakemikari. Paunobvisa chimwe chezvinhu zvina mu "moto katatu, ”Ipapo moto unogona kudzimwa.
Nekudaro, kuti ubudirire kudzimisa moto, unofanirwa kushandisa iyo chakadzimisa chakarurama.
Kuti unyatso kudzima moto, unofanirwa kushandisa chinodzima chakakodzera. (Mufananidzo / Greg Friese)
NYAYA DZINE RELATED
Nei ma rig moto, maamburenzi anoda zvinodzima zvinotakurika
Zvidzidzo mukudzimisa moto kudzima
Kutenga zvekudzimisa moto
Mhando dzakajairika kwazvo dzekudzimisa moto dzinoshandiswa pamhando dzakasiyana dzemafuta emoto ndeidzi:
Mvura inodzima moto. Zvinodzimisa moto zvemvura zvinodzima moto nekutora chinodziya chepatatu remoto. Ivo anoshandiswa pamoto weClass A chete.
Kemikari yakaoma moto wekudzimisa moto: Zvinodzima makemikari akaomarara anodzima moto nekukanganisa maitiro emakemikari etriangle yemoto. Dzinonyanya kushanda pamoto weClass A, B uye C.
CO2 chokudzimisa moto: Zvokudzimisa moto zvine kabhoni dhayokisaidhi zvinotora chinhu cheoksijeni chepatatu remoto. Vanobvisawo kupisa pamwe nekubuda kwechando. Dzinogona kushandiswa pamoto weClass B neC.
Uye nekuti moto wese unobatidzwa zvakasiyana, pane zvakasiyana zvekudzimisa moto zvichibva parudzi rwemoto. Zvimwe zvekudzimisa moto zvinogona kushandiswa pane inopfuura kirasi imwe yemoto, nepo vamwe vachinyevera nezvekushandiswa kwezvimwe zvekudzimisa moto zvekirasi.
Heano kuputsika kwezvokudzimisa moto zvakarongedzwa nerudzi:
Zvinodzima moto zvinotsanangurwa nerudzi: Izvo zvinoshandiswa nevadzimi vemoto pa:
Kirasi A chokudzimisa moto Zvokudzimisa moto izvi zvinoshandiswa pamoto unobatanidza mwenje, zvakadai sehuni, bepa, machira, marara uye mapurasitiki.
Kirasi B chokudzimisa moto Zvidzimidzi izvi zvinoshandiswa pamoto unobatanidza zvinwiwa zvinobatira moto, zvakaita semafuta, peturu uye mafuta.
Kirasi C chokudzimisa moto Zvidzimidzi izvi zvinoshandiswa pamoto unobatanidza michina yemagetsi, senge mota, ma transformer nemidziyo.
Kirasi D chinodzimisa moto Zvidzimidzi izvi zvinoshandiswa pamoto unobatanidza simbi dzinotsva, senge potasium, sodium, aluminium uye magnesium.
Kirasi K chinodzimisa moto Zvokudzimisa moto izvi zvinoshandiswa pamoto unobatanidza maoiri ekubikisa nemafuta, akadai semafuta emhuka uye emiriwo.
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti moto wega wega unoda chakadzima chakasiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu.
Uye kana uchizoshandisa chokudzimisa moto, ingo rangarira PASS: dhonza pini, tarisa pombi kana pombi pazasi pemoto, svina danho rekushandisa kuburitsa chinodzimisa uye kutsvaira kamwene kana hosipa kubva parutivi neparutivi kusvikira moto wadzima.